Yakatsetseka organic manyowa ekugadzira mutsara - YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.
Hupfu hwakasanganiswa hwemanyowa hunowanzo shandiswa kusimudzira ivhu uye nekupa zvinovaka muviri mukukura kwezvirimwa. Dzinogona zvakare kukurumidza kuora kana dzapinda muvhu, dzichisunungura zvinovaka muviri. Nekuti powdery yakasimba organic fetiraiza inonwiwa pamwero unononoka, hupfu hwefetireza manyowa anochengetwa akareba kupfuura emvura manyowa mafetiraiza. Iko kushandiswa kwe organic fetiraiza kwakadzora zvakanyanya kukuvara kune chirimwa pachacho uye nevhu nharaunda.
Organic fetiraiza inopa organic chinhu kune ivhu, nokudaro ichipa zvirimwa neinovakavakavaka kuti vabatsire kuvaka hutano ivhu masisitimu, pane kuvaparadza. Organic fetiraiza saka iine mikana mikuru yebhizinesi. Nezvirambidzo zvishoma nezvishoma uye kurambidzwa kwekushandisa fetereza munyika zhinji nemadhipatimendi akakodzera, kugadzirwa kwe fetiraiza yemhepo inova mukana wakakura webhizinesi
Chero chero chinhu chakasvibirira chakasanganiswa chinogona kuviriswa mu organic manyowa. Muchokwadi, kompositi inopwanywa uye kuongororwa kuti ive yemhando yepamusoro inotengeswa yeupfu inogadzira fetiraiza.
4. Marara epamba: marara emukicheni.
Maitiro acho aidiwa kugadzira fotereza yeupfu yakadai semafuta echingwa neem, cocoa peat powder, oyster shell poda, poda yemombe yakasvava, nezvimwewo zvinosanganisira kuzadza manyowa zvakakwana, kupwanya kompositi inoguma, wozoiongorora nekuiputira.
Hupfu hwehuvhu hwekugadzira fetereza ine tekinoroji yakapusa, mutengo mudiki wemidziyo yekudyara, uye mashandiro mashoma.
Poda yakasanganiswa yekugadzira fetiraiza maitiro: manyowa - kupwanya - nesefa - kurongedza.
Organic mbishi zvigadzirwa zvinowanzoitwa kuburikidza dumper. Kune akatiwandei ma parameter anokanganisa manyowa, anoti size yemakemikari, carbon-nitrogen ratio, zvemukati zvemvura, okisijeni zvemukati uye tembiricha Kuchenjerera kunofanira kubhadharwa kune:
1. Pwanyai zvinhu zvidiki zvidiki;
2. Carbon-nitrogen ratio ye25-30: 1 ndiyo yakanakisa mamiriro ekugadzira manyowa. Iyo yakawanda mhando yezvinhu zvinouya, iyo inowedzera mukana weiyo inoshanda kuora ndeyekuchengetedza yakakodzera C: N chiyero;
3. Hunyoro hwakaringana hwemanyowa emanyowa mbishi zvinowanzoita 50% kusvika 60%, uye Ph inodzorwa pa5.0-8.5;
4. Iko-roll-up kunosunungura kupisa kweye compost murwi. Kana izvo zvinhu zvikaora nenzira kwayo, tembiricha inoderera zvishoma neicho chinopidigura, yobva yadzokera padanho rapfuura mukati maawa maviri kana matatu. Ichi ndicho chimwe chezvakanakira zvakanakira dumper.
Girafu rakamisikidzwa rinoshandiswa kupwanya manyowa. Nekupwanya kana kukuya, zvinhu zvakaumbana mumumvumbi zvinokwanisa kuora kudzivirira matambudziko mupakeji uye kukanganisa hunhu hwefotereza.
Iyo roller roller sieve muchina haingobvise chete marara, asi zvakare inosarudza isina kukodzera zvigadzirwa, uye inotakura kompositi kune iyo sieve muchina kuburikidza nebhandi rinotakura. Maitiro ekuita aya akakodzera dhiramu nesefa michina ine yepakati saizi saeve maburi. Sieving yakakosha mukuchengetedza, kutengesa uye kushandisa kompositi. Sieving inovandudza chimiro che kompositi, inovandudza mhando yemumvumbi, uye inobatsira zvakanyanya kurongedza nekufambisa.
Fetereza isina kubviswa ichaendeswa kumuchina wekurongedza kuti utengese hupfu fetiraiza iyo inogona kutengeswa zvakananga kuburikidza nekurema, kazhinji iine 25 kg pahomwe kana 50 kg pahomwe sehomwe imwe chete yekuvhara.